ဒေါသကွီးတဲ့ ခဈြသူနဲ့ ပတျသတျပွီး ဒေါသထိနျးခြုပျစနေိုငျဖို့အတှကျ နညျးလမျး (၈) ခကျြ - Lifestyle Myanmar
ဒေါသကွီးတဲ့ ခဈြသူနဲ့ ပတျသတျပွီး ဒေါသထိနျးခြုပျစနေိုငျဖို့အတှကျ နညျးလမျး (၈) ခကျြ
လူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို အဖျက်ဆီးနိုင်ဆုံးသော အရာတစ်ခုကတော့ ဒေါသပါ။ ဒေါသထွက်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို သင်ဘာပဲအကြောင်းပြချက်တွေ၊ ဘယ်လိုအကျိုးအကြောင်းတွေပြောပြော သူ့ဖက်ကလက်မခံနိုင်ရခြင်းဟာ ယုတ္တိရှိတဲ့အရာကို စဉ်းစားဖို့ထက် စိတ်ခံစားချက်ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုကို ခံနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေအတွက် သင့်ဖက်ကလည်း ဒေါသနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်မယ် ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအခြေအနေကို အကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် ပထမဆုံးသင့်စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာထားပြီး ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ သင်သူ့ကိုတကယ်ချစ်တယ် ဆိုရင်ပေါ့။
၁။ သင့်ချစ်သူရဲ့ ဒေါသမီးတောက်ကို လောင်စာဆီဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဘယ်လိုစကားမျိုးမှမပြောပဲ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပါ။
သင့်ရဲ့ချစ်သူကို ဒေါသထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီး ဒီလိုအမျက်ဒေါသတွေအကုန်အပြင်ကို ထွက်ခွင့်ပြုခြင်းဟာ ရေရှည်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဒေါသကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားခြင်း မပြုလုပ်ပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယခုလိုထိပ်တိုက်တွေ့လာတဲ့အခါ သူ့ဖက်ကခုခံကာကွယ်ဖို့သက်သက် ပြုလုပ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအစား သူပြောချင်တာတွေအားလုံးကို နားထောင်ပေးပြီး ပြောဖို့ကျန်သွားတာတွေကိုပဲ သင့်ဖက်ကဖြည့်စွက်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်ချစ်သူရဲ့ဒေါသ ပိုမိုအေးဆေးတည်ငြိမ်လာပြီး သင်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်လာတာကိုအချိန်တိုအတွင်း ကြုံရပါလိမ့်မယ်။
၂။ လေးစားမှုရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ သင့်ရဲ့ point ကိုသူသိရှိလာအောင် လုပ်ပါ
ကိစ္စတိုင်းမှာ အမြဲတမ်းအမြင်နှစ်ဖက် ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး သူ့ရဲ့စိတ်ထဲက ဒေါသတွေကို ထွက်ပေါက်ရှာခွင့် ပြုပြီး သင့်ရဲ့ဆိုလိုရင်းနဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို နားလည်လာအောင် စိတ်အေးစွာနဲ့ပြန်လည်ကြိုးစားရှင်းပြပါ။ သင့်ရဲ့လေသံကိုမြှင့်ပြီး ငါပြောတာအမှန်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သူရဲ့လုပ်ရပ်တွေအတွက် တာဝန်ယူမှုပိုရှိလာအောင် လုပ်နိုင်ပြီး ရေရှည်မှာပြဿနာကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၃။ ပြောဆိုမှုဟာ အပြုသဘောဆောင်ပါစေ
သင့်ရဲ့ဆိုလိုရင်းနဲ့ အကြောင်းရင်းကို မရှင်းပြခင် သူမပြောတဲ့အမြင်ကို သင်သဘောမတူရင်တောင်မှ အသိအမှတ်ပြုပြီး အသေအချာနားထောင်ပေးလိုက်ပါ။ သင်ကယခုလို အပြုသဘောဆောင်ပြီး အသိအမှတ်ပြုနားထောင်ပေးခြင်းကြောင့် သင်ရှင်းပြတဲ့အရာတွေကိုလည်း သူက အပြုသဘောဆောင်ပြီး ပြန်လည်နားထောင်ဖို့ ဆန္ဒရှိလာစေပါတယ်။
တကယ်တော့ သင့်ချစ်သူရဲ့ဒေါသကြီးမှုဟာ သူ့ရဲ့နာကျင်မှုတွေနဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကို ထုတ်ဖော်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒေါသက အကြောက်တရားနည်းစေဖို့ နဲ့ ပိုပြီးစွမ်းအားကြီးစေတဲ့ အသွင်သဏ္ဏန်မျိုး မျက်နှာဖုံးတစ်ခု ဖန်တီးပေးလျှက်ရှိပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ယခုလိုအရာကို ဝန်မခံချင်ကြပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ကရုဏာနဲ့ သည်းခံမှုဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ သင့်ရဲ့မေတ္တာကို ဖော်ပြပေးခြင်းဖြင့် သူ့ရဲ့စိတ်အတွင်းက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ သံသယတွေအတွက် သင်အမြဲတမ်းသူ့ဖက်မှာရှိကြောင်း သိရှိပါစေ။
၅။ ဒေါသထွက်စေနိုင်မယ့်အရာတွေကို ရှောင်ရှားပါ
သင့်ချစ်သူက အလွယ်တကူနဲ့ ဒေါသထွက်တတ်ပြီး စိတ်ကိုချုပ်တည်းနိုင်စွမ်းမရှိတာကို သင်သိရှိရင် sensitive ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတာမျိုး လုံးဝမပြုလုပ်ပါနဲ့။ ထိုအကြောင်းအရာအတွက် သင်ဘယ်လောက်ပဲ အသည်းအသန်ဖြစ်နေပါစေ ၊သူဒေါသမထွက်နိုင်မယ့် ချဉ်းကပ်မှုမျိုးနဲ့ ပြောပြနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ကြိုတင်စဉ်စားထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဒေါသထိန်းချုပ်မှု နည်းလမ်းရဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုကတော့ သင့်ကိုယ်သင်သိဖို့ လိုအပ်တာပါ။ သင့်ရဲ့အပြုအမူက သင့်ချစ်သူရဲ့ ဒေါသအပေါ် တစ်နည်းနည်းနဲ့ သက်ရောက်မှု ရှိပါသလား? ဒီလိုသူမကြိုက်တဲ့ သင့်ရဲ့အမူအကျင့်တွေကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပြီး ပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားခြင်းကလည်း ဒေါသကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
၇။ နှစ်ယောက်စလုံး တည်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှ စကားပြောပါ
သင်လည်းပဲ ဒေါသထွက်လွယ်တတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကိုယ်သင်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့အထိ နှုတ်ဆိတ်နေပေးပါ။ ယခုလိုအခြေအနေတွေဟာ သင်ဒေါသထွက်ဖို့ ထိုက်တန်ရဲ့လား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးပါ။ သင့်စိတ်ပြေသွားပြီဆိုရင် သင့်ရဲ့ချစ်သူ စိတ်ပြေတဲ့အထိစောင့်ပြီးမှ စကားပြောဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၈။ သင့်ချစ်သူကို ထိန်းချုပ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့
ဒေါသထိန်းချုပ်ခြင်းဟာ အခြားသူတစ်ယောက်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့သူက သင့်ရဲ့သဘောထားကို သဘောမတူပဲ ဒေါသထွက်ရင်လည်း သူ့ကိုပြောင်းလဲဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ ဒီအစား သင့်ဖက်ကအမြင်တွေရဲ့ အားသာချက်တွေကိုပဲ ပြောပြပါ။ ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာလည်း ချိုချိုသာသာနဲ့ ပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သင့်ရဲ့အမြင်တွေကို ထောက်ခံဖို့အတွက် စည်းရုံးသိမ်းသွင်း နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လူရဲ့ စိတျခံစားခကျြကို အဖကျြဆီးနိုငျဆုံးသော အရာတဈခုကတော့ ဒေါသပါ။ ဒေါသထှကျနတေဲ့ သူတဈယောကျကို သငျဘာပဲအကွောငျးပွခကျြတှေ၊ ဘယျလိုအကြိုးအကွောငျးတှပွေောပွော သူ့ဖကျကလကျမခံနိုငျရခွငျးဟာ ယုတ်တိရှိတဲ့အရာကို စဉျးစားဖို့ထကျ စိတျခံစားခကျြရဲ့ ထိနျးခြုပျမှုကို ခံနရေခွငျးကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုအခွအေနအေတှကျ သငျ့ဖကျကလညျး ဒေါသနဲ့ပွနျလညျတုံ့ပွနျမယျ ဆိုရငျတော့ ပိုပွီးဆိုးတဲ့အခွအေနတှေေ ဆကျတိုကျဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
ဒီလိုအခွအေနကေို အကောငျးဆုံးကြျောဖွတျနိုငျဖို့အတှကျ ပထမဆုံးသငျ့စိတျကိုငွိမျးခမျြးစှာထားပွီး ပွနျလညျထိနျးခြုပျနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။ သငျသူ့ကိုတကယျခဈြတယျ ဆိုရငျပေါ့။
၁။ သငျ့ခဈြသူရဲ့ ဒေါသမီးတောကျကို လောငျစာဆီဖွဈစနေိုငျတဲ့ ဘယျလိုစကားမြိုးမှမပွောပဲ စိတျရှညျရှညျထားပါ။
သငျ့ရဲ့ခဈြသူကို ဒေါသထှကျခှငျ့ပေးလိုကျပွီး ဒီလိုအမကျြဒေါသတှအေကုနျအပွငျကို ထှကျခှငျ့ပွုခွငျးဟာ ရရှေညျအတှကျအကောငျးဆုံးနညျးလမျး ဖွဈနတေတျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ဒေါသကို ထိပျတိုကျရငျဆိုငျဖို့ ကွိုးစားခွငျး မပွုလုပျပါနဲ့။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ယခုလိုထိပျတိုကျတှလေ့ာတဲ့အခါ သူ့ဖကျကခုခံကာကှယျဖို့သကျသကျ ပွုလုပျလာပါလိမျ့မယျ။ ဒီအစား သူပွောခငျြတာတှအေားလုံးကို နားထောငျပေးပွီး ပွောဖို့ကနျြသှားတာတှကေိုပဲ သငျ့ဖကျကဖွညျ့စှကျပေးလိုကျပါ။ သငျ့ခဈြသူရဲ့ဒေါသ ပိုမိုအေးဆေးတညျငွိမျလာပွီး သငျကိုယျတိုငျလညျး စိတျသကျတောငျ့သကျသာ ဖွဈလာတာကိုအခြိနျတိုအတှငျး ကွုံရပါလိမျ့မယျ။
၂။ လေးစားမှုရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ သငျ့ရဲ့ point ကိုသူသိရှိလာအောငျ လုပျပါ
ကိစ်စတိုငျးမှာ အမွဲတမျးအမွငျနှဈဖကျ ရှိနိုငျပါတယျ။ ပထမဆုံး သူ့ရဲ့စိတျထဲက ဒေါသတှကေို ထှကျပေါကျရှာခှငျ့ ပွုပွီး သငျ့ရဲ့ဆိုလိုရငျးနဲ့ အကွောငျးပွခကျြကို နားလညျလာအောငျ စိတျအေးစှာနဲ့ပွနျလညျကွိုးစားရှငျးပွပါ။ သငျ့ရဲ့လသေံကိုမွှငျ့ပွီး ငါပွောတာအမှနျဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုးမဖွဈပါစနေဲ့။ ဒီနညျးလမျးဟာ သူရဲ့လုပျရပျတှအေတှကျ တာဝနျယူမှုပိုရှိလာအောငျ လုပျနိုငျပွီး ရရှေညျမှာပွဿနာကိုတညျတညျငွိမျငွိမျဖွရှေငျးနိုငျဖို့ ကူညီပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
၃။ ပွောဆိုမှုဟာ အပွုသဘောဆောငျပါစေ
သငျ့ရဲ့ဆိုလိုရငျးနဲ့ အကွောငျးရငျးကို မရှငျးပွခငျ သူမပွောတဲ့အမွငျကို သငျသဘောမတူရငျတောငျမှ အသိအမှတျပွုပွီး အသအေခြာနားထောငျပေးလိုကျပါ။ သငျကယခုလို အပွုသဘောဆောငျပွီး အသိအမှတျပွုနားထောငျပေးခွငျးကွောငျ့ သငျရှငျးပွတဲ့အရာတှကေိုလညျး သူက အပွုသဘောဆောငျပွီး ပွနျလညျနားထောငျဖို့ ဆန်ဒရှိလာစပေါတယျ။
တကယျတော့ သငျ့ခဈြသူရဲ့ဒေါသကွီးမှုဟာ သူ့ရဲ့နာကငျြမှုတှနေဲ့ စိုးရိမျမှုတှကေို ထုတျဖျောဖို့အတှကျ နညျးလမျးတဈခုလို ဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဒေါသက အကွောကျတရားနညျးစဖေို့ နဲ့ ပိုပွီးစှမျးအားကွီးစတေဲ့ အသှငျသဏ်ဏနျမြိုး မကျြနှာဖုံးတဈခု ဖနျတီးပေးလြှကျရှိပွီး သူတို့ကိုယျတိုငျလညျး ယခုလိုအရာကို ဝနျမခံခငျြကွပါဘူး။ ဒီလိုအခွအေနတှေကေို ကိုငျတှယျဖွရှေငျးဖို့အတှကျ ကရုဏာနဲ့ သညျးခံမှုဟာ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခုပါ။ သငျ့ရဲ့မတ်ေတာကို ဖျောပွပေးခွငျးဖွငျ့
သူ့ရဲ့စိတျအတှငျးက စိုးရိမျပူပနျမှုတှေ သံသယတှအေတှကျ သငျအမွဲတမျးသူ့ဖကျမှာရှိကွောငျး သိရှိပါစေ။
၅။ ဒေါသထှကျစနေိုငျမယျ့အရာတှကေို ရှောငျရှားပါ
သငျ့ခဈြသူက အလှယျတကူနဲ့ ဒေါသထှကျတတျပွီး စိတျကိုခြုပျတညျးနိုငျစှမျးမရှိတာကို သငျသိရှိရငျ sensitive ဖွဈတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို ဆှေးနှေးတာမြိုး လုံးဝမပွုလုပျပါနဲ့။ ထိုအကွောငျးအရာအတှကျ သငျဘယျလောကျပဲ အသညျးအသနျဖွဈနပေါစေ ၊သူဒေါသမထှကျနိုငျမယျ့
ခဉျြးကပျမှုမြိုးနဲ့ ပွောပွနိုငျမယျ့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးကို ကွိုတငျစဥျစားထားဖို့ လိုပါတယျ။
ဒေါသထိနျးခြုပျမှု နညျးလမျးရဲ့ လိုအပျခကျြတဈခုကတော့ သငျ့ကိုယျသငျသိဖို့ လိုအပျတာပါ။ သငျ့ရဲ့အပွုအမူက သငျ့ခဈြသူရဲ့ ဒေါသအပျေါ တဈနညျးနညျးနဲ့ သကျရောကျမှု ရှိပါသလား? ဒီလိုသူမကွိုကျတဲ့ သငျ့ရဲ့အမူအကငျြ့တှကေို ကိုယျတိုငျရှာဖှပွေီး ပွုပွငျဖို့ကွိုးစားခွငျးကလညျး ဒေါသကိုထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ အထောကျအကူဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။
၇။ နှဈယောကျစလုံး တညျငွိမျတဲ့အခြိနျမှ စကားပွောပါ
သငျလညျးပဲ ဒေါသထှကျလှယျတတျသူတဈယောကျ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ကိုယျသငျစိတျတညျငွိမျတဲ့အထိ နှုတျဆိတျနပေေးပါ။ ယခုလိုအခွအေနတှေဟော သငျဒေါသထှကျဖို့ ထိုကျတနျရဲ့လား ကိုယျ့ကိုယျကိုပွနျမေးပါ။ သငျ့စိတျပွသှေားပွီဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ခဈြသူ စိတျပွတေဲ့အထိစောငျ့ပွီးမှ စကားပွောဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၈။ သငျ့ခဈြသူကို ထိနျးခြုပျဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့
ဒေါသထိနျးခြုပျခွငျးဟာ အခွားသူတဈယောကျကို ထိနျးခြုပျဖို့မဟုတျပါဘူး။ တကယျလို့သူက သငျ့ရဲ့သဘောထားကို သဘောမတူပဲ ဒေါသထှကျရငျလညျး သူ့ကိုပွောငျးလဲဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့။ ဒီအစား သငျ့ဖကျကအမွငျတှရေဲ့ အားသာခကျြတှကေိုပဲ ပွောပွပါ။ ဒီလိုပွောတဲ့အခါမှာလညျး ခြိုခြိုသာသာနဲ့ ပွောဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးဟာ သငျ့ရဲ့အမွငျတှကေို ထောကျခံဖို့အတှကျ စညျးရုံးသိမျးသှငျး နိုငျပါလိမျ့မယျ။